Maamulka Gobalka Banaadir oo beeniyay haddalo kasoo yeeray AMISTY – idalenews.com
Maamulka Gobalka Banaadir oo beeniyay haddalo kasoo yeeray AMISTY
Afayeen u hadlay Maamulka Gobalka Banaadir ayaa ka jawaabay hadalka ka soo yeeray Hay,adda Xuquuda Aadanaah ee AMISTY waxa uuna sheegay in warbixinta Hay,adada soo sartay tahay mid aan sax ahayn oo been abuur ah.
Waxa uu sheegay in qaabka Hay,adda wax u dhigtay arinta ahayn laakiin waxa uu xaqiijiyay in uu jiro qorshe la xariira in Qoysas badan oo barakacaayaal ah lagu amray in ay ka guuraan Goobaha ay ka degan yahiin gudaha Magaalada Muqdisho.
Sargaalkaan ka tirsan Maamulka Gobalka Banaadir waxa uu sheegay in sabaabta arintaa keentay tahay in Dowlada ayaa doonaysa ayuu yiri in dib dayac tir ugu samayso Xarumahii Dowlada waxa uuna sheegay in danta shakhsiyadeed ka wayn tahay danta guud.
Afayeenka Maamulka Gobalka Banaadir u hadlay ayaa sheegay in ay jiraan gooba dadka loo cayimay oo Magaalada k baxsan kuwaas oo la qorshaynayo in la dajiyo waxa uuna sheegay in barnaamijkaan uu yahay mid la rabo in bilicda Caasimada lagu hagaajiyo.
C/raxmaan Faroole oo lagu qanciyay inuu ka qeybgalo shirka ka Furmaya Magaalada Brussels. (Warbixin)